Madaxweynaha Hirshabelle Waare oo isku shaandheeyay golihiisa Wasiirada – Banaadir weyne
Madaxweynaha Hirshabelle Waare oo isku shaandheeyay golihiisa Wasiirada
Madaxweynaha maamulka Hirshabelle, Maxamed Cabdi (Waare), ayaa maanta isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa Wasiirada, iyadoo mudooyinkii danbe la hadal hayay isku shaandheyntan.
Xubnahan uu soo magacaabay oo ah 21, ayaa 12 kamid ah waxey yihiin Wasiiro, halka 9 ay yihiin Wasiiru dowle, kuma jirto wax dumar ah Wasiiradan, waxaana 20 kamid ah ay yihiin Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Hirshabelle, taasoo shaki gelin karta in lala xisaabtamo Xuukuumada Madaxweyne Waare.
Wararka qaar oo soo baxaya waxa ay sheegayaan iney jiraan durbadiiba Xildhibaano Saluug ka muujiyay Wasaaradaha loo dhiibay, kuwaasoo laga yaabo Saacadaha soo socdo iney ku dhawaaqaan iney iska diideen xilalkooda.
Xubnaha qaar ee la soo magacaabay ayaa inoo sheegay in magacaabistan deg dega ah looga gol leeyahay sidii Madaxweyne Waare uu isaga leexin lahaa Cabashada Xildhibaanada ee la xiriirta mushaar la’aanta heysata mudada dhowrka bilood ah.
Qaar kamid ah Wasiirada la soo magacaabay, ayaa ahaa kuwo aad u dhaliili jiray hanaanka uu wax ku maamulo Madaxweynaha Hirshabelle Waare, waxeyna dadka ku sugan Jowhar soo sheegayaan iney tahay mid xal loogu raadinayo eedohooda.
Maamulka Hirshabelle oo ahaa maamulkii u danbeeyay ee la sameeyay sanadkii 2016, ayaa la sheegaa inuu yahay midka ugu shaqada yar maamulada dalka ka jira, iyadoo Wasiiradan la soo magacaabay aan la ogeyn halka ay ku shaqeyn doonaan maadaama aysan Xafiisyo heysan, iyagoo isaga shaqeeya qaarkood magaalada Muqdisho oo ay kula kulmaan Hay’adaha ka howlgala dalka.
Halkan Ka Aqriso magacyada Wasiirada la soo magacaabay:
– Universal Somali TV
Jubbaland Oo Ka Hadashay Qoraalada Ka Soo Baxay Dowladda Soomaaliya Iyo Beesha Caalamka